Ikhaya eliqhelekileyo elinayo yonke into ezantsi nje esitratweni - I-Airbnb
Ikhaya eliqhelekileyo elinayo yonke into ezantsi nje esitratweni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarl
Konke okwakho, hayi indawo ekwabelwana ngayo. Ukutyelela usapho ngexesha lomtshato kwicawa yaseOlivet yamaLuthere, indawo ezolileyo yeshishini okanye ukuba ufuna indawo yedolophu eneendawo zokutyela emva kokungena kwenye yeepaki zikarhulumente ezikufutshane? Hlala kwindawo esembindini yeFargo, ND. Ikufuphi neevenkile kunye neendawo zokutyela. Eli khaya linamagumbi amabini okulala yindawo entle yokutyelela kwaye wenze izinto. Inekhitshi elisandula ukulungiswa elingenamthungo kunye negumbi lokuhlala, lokundwendwela i-epic okanye ukuphumla nje.
Enkosi ngokujonga indlu yethu encinci entle. Indlu ilibali elinye elinamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elikumgangatho ofanayo. Ikhitshi liphuculwe ngeplani yomgangatho ovulekileyo. Abahlobo abanoboya bamkelekile kakhulu, kodwa ndiyanicela ukuba nichole amantshontsho abo. Kukho indawo eninzi yokupaka ezitalatweni zobusuku obunye i-U-Hauls kunye neRV's, ixesha elininzi. Sabelana ngeendawo zokupaka kunye neshishini elixakekayo ngo-Agasti.
Indlu ibekwe kwindawo esembindini yaseFargo. Ifikeleleka ngokulula ukusuka kwi-University drive kunye ne-13th Ave. Ukuba kwi-13th Ave S kuxakeke kancinane yi-traffic emini, kuthi cwaka kakhulu emva kwe-7pm. Iindonga zendlu zifakwe kakuhle kwaye zifakwe iifestile ezintsha, nto leyo eyenza ukuba nayiphi na ingxolo ingabikho. Ikwindlela yongxamiseko yekhephu, nto leyo ethetha ukuba ikhephu likhutshelwa ngomhla we-13 kunye neYunivesithi ngokukhawuleza.
Ndisebenza ngaphesheya kwe-alley kwaye ndihlala ekupheleni kwebhloko ukusuka kwindlu ukuze ube nokufikelela ngokulula kum ngexesha lokuhlala kwakho.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 09:00 - 01:00